345 Views0Rates
265 pk, Bo Sun Pat St., Upper Blk., Pabedan Township.
Yadanabon Glass Co., Ltd.'s Profile
YADANABON Glass ဟာ ထိုင်ဝမ်ကနေ အရည်သွေးမြင့်တဲ့ မှန်တွေကို မှာယူပြီး မြန်မာပြည်မှာ စက်ရုံနဲ့ စနစ်တကျ ပြန်ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ခိုင်ခံ့လှပပြီး လုံခြုံစိတ်ချမှုကို အပြည့်အ၀ အာမခံနိုင်တဲ့ မှန်အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
YADANABON Glass တွင် Tempered Glass၊ Laminated Glass၊ Bend Tempered Glass (မှန်အခုံး)၊ Insulated Glass (လျှပ်စစ်ဒဏ်နဲ့ အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့မှန်)၊ Bevelling (အနားဇောင်းတွေကို ချိုးထားတဲ့မှန်) & Grinding Edge (မှန်နှုတ်ခမ်းတွေကို သွေးထားတဲ့မှန်)၊ Groving (မှန်တွေကို ထွင်းထားတဲ့မှန်) & Mirror Glass (ပြဒါးမှန်)၊ Shower Door (ရေချိုးခန်း သုံးဖွင့်မှန်) & Enterance Door Glass (မှန်တပ်ဆင် အသုံးပြုထားတဲ့ ၀င်ပေါက်တံခါးတွေ)၊ Sensor Automatic Sliding Doors (အလိုအလျောက် တံခါးအဖွင့်အပိတ်မှန်) & Frameless Sliding Doors Glass၊ Floding Glass Door & Stair (မှန်အမိုးတွေနဲ့ လှေခါးလက်ရန်းတွေ)၊ Pattern Glass၊ Solar Reflective Float Glass (နေရောင်ခြည်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ရောင်ပြန်မှန်)၊ Sand Blasting & Sticker (အလှဆင်ပြုပြင်မွမ်းမံထားတဲ့မှန်)၊ Clear Float Glass & Crystal Glass (မျက်နှာပြင် ချောမွေ့ ညီညာလွန်းလှတဲ့မှန်) စတဲ့ မှန်အမျိုးစားတွေကို ရရှိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှန်အမျိုးစားတွေထဲကမှ Safety Glass တွေဖြစ်တဲ့ Tempered Glass နဲ့ Laminated Glass အကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ Tempered Glass ကို ကြီးမားတဲ့ အပူပေးတဲ့နေရာမှာ ၆၂၀ စင်တီဂရိတ်အထိ အပူပေးပြီး ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ မီးဖိုကြီးကနေမှ တဆင့် မှန်ကို Cool Air (လေအေး)နဲ့ အလျင်အမြန် အအေးပေးပြီး သူ့ရဲ့အလယ်ပိုင်းကို ဆွဲဆန့်လို့ ရနိုင်တဲ့ အချိန်တွင်းမှာပဲ ဖိအားနဲ့ Compressive ဖိနှိပ်ထားပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကတော့ Tempered Glass ၄-၅ ကြိမ် အပြည့်လုပ်ခြင်းဟာ တခြားတူညီတဲ့ အထူ (Thickness) အပူပေးထားတဲ့ မှန်တွေထက် ပိုမိုခိုင်မာပါတယ်။ Tempered Glass ဟာ တခြားအပူပေးပြီး ဆွဲဆန့်ထားတဲ့ မှန်တွေထက် ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းကို ပိုမိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အကယ်၍ ကျိုးပဲ့ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မှန်တွေဟာ အပိုင်းအစသေးတွေ၊ အံစာတုံး ပုံသဏ္ဍာန်ကျိုးပဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။
Laminated Glass ကတော့ PVB (Polyvinyl Butyral) Interlayer နဲ့ မှန်ရဲ့ အလွှာ နှစ်ခုကြားမှာ အတူတကွ ညှပ်ထားတာကြောင့် Safety အတွက် စစ်မှန်ပြီး အနုပညာလှပမှုနဲ့ ညီညွှတ်စွာ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Security မှန်တစ်မျိုးပါပဲ။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ နေရောင်ခြည်၊ ရောင်ခြည် တန်းနဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဆူညံမှုတွေ၊ မှန်ကျိုးပဲ့ ပျက်စီးမှုတွေကို အမြင့်ဆုံး ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ PVB ဆိုတဲ့ အရာဝတ္ထုနဲ့ ကပ်ငြိထားတဲ့အတွက် အဲ့ဒီ PVB ကပ်ငြိနေတဲ့ ဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ အမှုန်အစတွေရဲ့ ဒဏ်ကနေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ YADANABON Glass က ဂရုတစိုက်နဲ့ သတိထား ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ YADANABON Glass ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရပ်တည်လာနိုင်တဲ့အတွက် ဈေးနှုန်းပိုင်းမှာရော အရည်သွေးပိုင်းမှာပါ စိတ်ချရပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာတင်မဟုတ်ဘဲ နယ်ဘက်တွေကိုပါ လက်ကားဖြန့်ချိပေးပါတယ်တဲ့။
Laminated Glass၊ Bend Tempered Glass (မှန်အခုံး)
Insulated Glass (လျှပ်စစ်ဒဏ်နဲ့ အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့မှန်)၊
Bevelling (အနားဇောင်းတွေကို ချိုးထားတဲ့မှန်) & Grinding Edge (မှန်နှုတ်ခမ်းတွေကို သွေးထားတဲ့မှန်)၊
Groving (မှန်တွေကို ထွင်းထားတဲ့မှန်) & Mirror Glass (ပြဒါးမှန်)၊
Shower Door (ရေချိုးခန်း သုံးဖွင့်မှန်) & Enterance Door Glass (မှန်တပ်ဆင် အသုံးပြုထားတဲ့ ၀င်ပေါက်တံခါး)၊
Sensor Automatic Sliding Doors (အလိုအလျောက် တံခါးအဖွင့်အပိတ်မှန်) & Frameless Sliding Doors Glass၊
Floding Glass Door & Stair (မှန်အမိုးတွေနဲ့ လှေခါးလက်ရန်း)၊
Pattern Glass၊ Solar Reflective Float Glass (နေရောင်ခြည်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ရောင်ပြန်မှန်)၊
Sand Blasting & Sticker (အလှဆင်ပြုပြင်မွမ်းမံထားတဲ့မှန်)၊
Clear Float Glass & Crystal Glass (မျက်နှာပြင် ချောမွေ့ ညီညာလွန်းလှတဲ့မှန်)
Yadanabon Glass Co., Ltd.'s Map
265 pk, Bo Sun Pat St., Upper Blk.,
International Glass Co., Ltd....
36, Heavy Industry,
Cor. of 35th & 90th St.,
Paragu Glass & Aluminium Sale...
353/355, 1st Flr., Shwebontha St., Upper Blk.,